Dhalinyarro soomaali ah oo kufsi ay kula kaceen gabar da’yar oo xukun lugu riday | Somaliska
Dhalinyarro la sheegay in asalkoodii soomaali yihiin oo saddex ahaa ayaa toddobaadkii ina dhaafay dabayaaqadiisi waxaa lugu riday xukuno kala duwan. Dhalinyaradan oo da’dooda lugu sheegay 19, 20.
Wiilashan ayaa la sheegay in gabar da’yar ay kula kaceen jirdil iyo kufsi. Labbo ka mid ah ayaa lugu xukumay saddex sanno oo xarig ah, halka kan kale isagana labbo sanno oo xarig ah, sababo lugu sheegay muddadii ay labadda kale kufsigaasi u geeysanayeen uu ka hayey gacmaha.
Dacwad oogaha oo codsaday in labadda wiil ee 19 iyo 20 jirka ah dalka laga musaafiriyo ayaan suuragalin, ka dib markii maxkamadda diiday. Tanoo qareenkii u doodeeysay wiilashan ee Elisabeth Massi Fritz ay ku tilmaantay “cadaad” oo ay ula jeedo in ay ka bad baadeen musaafurintii dalka laga musaafirin lahaa.
Gabadhan da’yarta ah ayaa bartamihii bishii abriil ee sanadkan waxaa ay markii ugu horeeysay ay wiilashan dhalinyarada ahi kula kulantay guri xaflad lugu qabay oo ku yaala deegaamka Södermalm caasimadda Iswiidhan Stockholm. Kooxdan ayaa kufsi aad u fool xun marar badan sida ay sheegeen garsoorkii dacwadan qaadayey. Mid kamid ah wiilasha kufsiga geeystay ayaa sheegay in gabadhu qaladka laheyd ka dib markii ay sadex wiil guri kaligeed la seextay una galmooday isagoo dhinaca kalena uu la lahaa gabar xirriir, kuna shalaayey falkaas oo ku tilmaamay inuu qiyaamay saaxiibtiis waa sida uu isku difaacay e.
Dhinaca kale xeer ilaaliyaha dacwadan oo ka warbixinayey falkan ayaa sheegay in saddexaan ay kufsi bareer ah u geeysteen gabadhaa yar iyagoo cunaha ku dhagay ama ceejiyey islamarkaasina heeystay habeenkii oo dhan. Gabadhan ayaa markii dambe fariin qoraal ah u dirtay aabaheed iyadoo u sheegtay in kufsi loo geeystay kana soo baxsaday iyadoo aan sidan kabo iyo jaakad gurigii qasabka loogu heeystay ugu dambeyntiina aabaheeda wacay booliska. Muddo gaaban ka dibna waxaa gacanta lugu soo dhigay dambiileyaashaas.
Ugu dambeyntiina inkastoo xukun lugu riday wiilashan soomaalida ah, hadana waxaa ay ka baaqsadeen in dalka laga dhoofiyo, balse ay mudanayaan xabsi dheer. Ma ahan markii ugu horeeysay ee ay koox wiilaal lugu sheegay ineey yihiin soomaali ay kufsi geeysteen, dhawaan ayaa wararku sheegeen koox kale oo soomaali ah kufsi kula kaceen islaan afartan jir ah oo ay jidka kaga soo qaadeen mooto. Kuwaas oo ay haatan socoto dacwadooda.
Cade Ðahir says:
Waxaa fican in wadanka lagasaro